Ninkii geystay weerarka London wuxuu ku dhashay Britain - BBC News Somali
Ninkii geystay weerarka London wuxuu ku dhashay Britain
Image caption Weerarkii Westminster
Ra'iisalwasaaraha Britain, Theresa May, ayaa sheegtay in ninkii weerarka ku qaaday aqalka baarlamaanka maalintii Arbacada uu ku dhashay dalka Britain.
Waxay sheegtay in hay'adaha sirdoonka ay horay u baareen arin ku saaban xiriirka uu la leeyahay kooxaha xagjirka ah.
Waxay baarlamaanka u sheegtay inaan hopray loo hayn macluumaad sirdoon oo sheegaya in uu doonayey in uu weerar qaado .
Hadal ay u jeedisay aqalka hoose ee baarlamaanka ayay ra'isalwasaare Theresa May ku sheegtay in weerarkaas uu ahaa mid ka dhan ah dimuquradaiyada , xoriyatul qowlaka iyo xuquuqda aadanaha.
Wassiirka ariaha dibada ee Faransiiska Jean-Marc Ayrault oo ka hadlayey hoteel Mariot ee magaalada London ayaa sheegay in Faransiiska iyo Britain ay waajib tahay in sii ahaadaan kuwa mideeysan si ay u wajahaan khatarta uga imaaneyeyo kooxah xagjirka. Booliska UK ayaa xabsiga u taxaabay ilaa iyo 7 qof ka dib weerarkii ka dhacay magaalada London Arbacadii oo 4 qof ay ku dhinteen.
Mas'uul ka tirsan booliska la dagaalanka argagixisada Mark Rowley ayaa sheegay in boqolaal ka tirsan booliska la dagaalanka argaagxisada ay weerareen ilaa iyo lix guri oo ku yaalla London iyo Birmingham.
"Wali waxaan aaminsanahay in ninka weerarkan soo qaaday uusan cid ku xirnayn balse uu ka shidaal qaatay argagixisada caalamiga ah'', ayuu yiri Rowley oo warfidiyeenada kula hadlay magaalada London. Booliska UK ayaa sheegay in weerarkii Arbacada ka dhacay buundada Westminster iyo bannaanka hore ee baarlamaanka dalkaasi ay u badan tahay inuu xiriir la leeyahay Islaamiyiinta.
Ra'iisul Wasaare Theresa May ayaa sheegtay in weerrarku uu ahaa mid shaydaannimo ah oo lagu qaaday xorriyadda, dimuqraadiyadda iyo xorriyadda hadalka.
DAAWO: Tababar ku saabsan sida la isu badbaadiyo haddii weerar argagixiso uu dhaco